जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! – Dainik Samchar
February 8, 2021 381
यस्तैशब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
Prevभाइरल हुनकै लागि यी युवती ले गोबर खाइन हेर्नुहोस
Nextके भयो गायक पशुपति शर्मालाइ ? अस्पतालबाट आयो यस्तो भिडियो